Walibi Holland na Toverland nnukwu ndị mmeri nke Scare Awards - Thrilltalk.com
Home/Halloween/Walibi Holland na Toverland nnukwu ndị mmeri nke Scare Awards
Walibi Holland na Toverland nnukwu ndị mmeri nke Scare Awards
0 20 Ejiri 4 gụọ
Saturdaybọchị Satọde gara aga ọ bụ nke mbụ Scare Awards na Netherlands. Onyinye Egwu bụ akụkụ nke ogbako Halloween a na-akpọ Scare Event e kere ma hazie ya Dennis van Breukelen van Scarezone.nl. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụjọ na ụlọ ọrụ Halloween na Netherlands na-eto eto. Ebumnuche nke Ihe Omume Ahụike amụrụ iji nwekwuo mkpalite nke ụlọ ọrụ ahụ. Site na Nlekọta Ahụike, ha chọrọ ịnye ikpo okwu ebe ndị na-ahazi ihe omume nwere ike ịgbakọta iji were ụlọ ọrụ ahụ gaa n'ọzọ ọzọ site na nkuzi na mkparịta ụka.
Halloween connoisseur: 'More ihe omume Halloween na-atụ anya na 2021'
Mbipụta nke mbụ gara nke ọma. A na-ererịrị tiketi ndị ahụ n'izu tupu ihe omume ahụ. A pụkwara ịchọta ndị na-eme ihe ngosi na mmemme ahụ. Nzukọ ahụ arụ ọrụ nke ọma na ndị ngosi dịka Ememme HaP, Anọgidewokwa na-anyụ, SR Artwork & EpicFX.
Ọnọdụ nke mbipụta izizi dị na ihe omume ama ama nke Perry Mulder Scare-Me. Nhọrọ maka ebe a bụ anya ehi. Ọnọdụ mara mma na-etinye ndị ọbịa ngwa ngwa n'ọnọdụ ikuku Halloween.
zutere menye ụjọ ndị na-eme ihe nkiri, ndị nhazi na ndị nwere mmasị malitere mmemme ahụ. Site na ndị ọkà okwu otu mkparịta ụka na ma eleghị anya isi ihe nke mgbede. Onyinye mbu nke Dutch Scare Awards.
Anyị edepụtara nsonaazụ gị maka otu otu:
Echiche kachasị mma
Mpaghara Horror sitere na Best emeriwo onyinye a. N'inwe ahụmịhe zuru oke na ahụmịhe pụrụ iche na ụlọ, nke a bụ onyinye ziri ezi kpamkpam n'uche anyị. Ozi juri zuru ezu:
Mpaghara Horror 8.04
N'abalị Freaky 7.36
Toverland Halloween 7.27
Okoneyo ehihie Honig 7.14
Halloween Abalị Na-atụ Egwu 7.05
Na-atụ m ụjọ 7
Ọhịa nke Egwu 7
Usọ nke… 6.5
Nyocha Bajes 6.08
Obodo ndị ahụ V 6
Ndị na-eme egwuregwu kachasị mma
Nzukọ ahụ kwuru ka enyocha ya dị ka okwu nke ya si dị n'ụkpụrụ ndị a:
Otu a bu ihe omume kachasi nma Ndị na-eme egwuregwu na-atụ egwu. E gosipụtara nke a na egwuregwu ahụ
nke ndị na-eme ihe nkiri. Ndị na-eme ihe nkiri a zụrụ ha nke ọma. Ha na-eme ka ọrụ ha pụta nke ọma? Ọ bụ eziokwu
menye ụjọ ndị na-eme ihe nkiri kama ndị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ reenactors. Ma ha maara ka egwu?
Onye mmeri: Walibi Hollandna Halloween Abalị Na-atụ Egwu. Na ebe mara mma ma na-eju anya maka ihe omume Hellendoorn: Mkpu.
Ozi juri zuru ezu:
Halloween Abalị Na-atụ Egwu / Oge Spooky 8.22
Na-atụ m ụjọ 7.9
Toverland Halloween 7.69
Mpaghara Horror 7.5
Okoneyo ehihie Honig 6.64
N'abalị Freaky 6.28
Usọ nke… 6
Nyocha Bajes 5.7
Obodo ndị ahụ V 5.7
Etemeete kachasị mma
Kedu ihe omume nwere ihe kacha mma. Kedu mmemme ga-elebara anya nke ọma
Emefu anam-elu? A na-eji prosthetics eme ihe ka ọ bụ naanị ihe nkpuchi?
Onye mmeri nke Award Scare for “Best Makeup” bụ Toverland Halloween. Ha bụ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-etinyekwu uche maka uwe na nhazi n'oge a
ihe omume. Ebe mmemme ndị ọzọ ebidola iji ọtụtụ nkpuchi.
Toverland Halloween 8.31
Na-atụ m ụjọ 7.59
Mpaghara Horror 7.11
Halloween Abalị Na-atụ Egwu 7.08
Usọ nke… 7
Ọhịa nke Egwu 6.5
Obodo ndị ahụ V 6.28
N'abalị Freaky 6
Okoneyo ehihie Honig 6
Nyocha Bajes 6
Maze kacha mma
Kedu ụlọ ụlọ na Netherlands kacha mma n'oge a? Ahụmahụ dị a uniqueaa dị ọhụrụ na nke ọhụrụ?
Naanị ụlọ 1 na-echekwa otu ụlọ ahọpụtarala maka mmemme ọ bụla.
Ihe dị iche n'etiti nọmba 1 na nọmba 2 bụ ihe 0.08. Enwere ike ịkọwa ya. "N'okpuru" bụ otu
Ahụmahụ dị ukwuu nke dị mkpụmkpụ ma dịworị ogologo oge 3. Ndị edemede
Ngọngọ ”bụ echiche ọhụrụ nke ndị juri ahụbeghị na mmemme ọ bụla ọzọ.
Nke a bụ ihe kpatara mkpebi.
Egwu Me Ndi Dere Gbochie 8.18
Halloween Abalị Na-atụ Egwu N'okpuru 8.1
Flọ Ahụhụ Ahụhụ Halloween Ahụ .7.79lọ Ọgwụ XNUMX
Egwu Mpaghara Ebe akwu Ulo 7.58
Mpaghara Egwu Egwu Ike Osisi 7.46
Egwu M Gbuo 7.46
Halloween Egwu Ehihie Jefferson Manor 7.24
Toverland Halloween Ndị Witches Forest 7.24
Halloween Spooky Days Egwu Spooky Manor 7.23
Ememme Abalị Na-atụghị Anya Ọjọọ Ezumike II 7.17
Toverland Halloween llọ Nkịta 7.17
Toverland Halloween Na-atụ Egwu 7.15
Heksendoorn Horror nkwari akụ 7
Chlọ nyocha Ọnwụ nke Witch nke 7
Reamlọ nkwupụta ụda na nkwari akụ 7
Na-eti mkpu Lablọ nyocha Ọnwụ 7
Carelọ nkwari akụ m na-egwu egwu 6.91
Halloween Egwu Egwu Abali The Villa 6.69
Egwu Me Baku 6.64
Psychoshock Egwu abalị nke abalị 6.32
Toverland Halloween tọrọ atọ 6.28
Ndị ọjọọ na-atụ Egwu! 6.16
Ndị na-eme ihe ọjọọ The Haunted Dollhouse 6.14
Heksendoorn De Weksenschool 6
Ugbo nke oke egwu n'ime oke 6
Ugbo nke Egwu Kpuruchiri Anya 6
Na-eti mkpu oflọ Ndị Amoosu 6
Na-atụ m egwu Pirates Adventure 5.91
Ndị na-achọ onyinyo Mpaghara Horror 5.88
Ndị ọjọọ ahụ The Mine 5.72
Na-eme M Chọọchị Ahụhụ 5.57
Ndi ojoo Ekwensu abali “Ugolo abuo” 5.44
Ndi ojoo Black Forest 5.44
Halloween Spooky Days Campsite nke Anyanwu 5.4
Ugbo nke Ujo N'èzí Maze 5
Mkpu Zombie Izere 5
Mkpu mgbanaka 5
Ndị na-eme ihe nkiri Fairground of Dread 4.72
Ndị ọjọọ Mpaghara X 4
Ihe omume kacha mma
Kedu ihe omume kachasị mma. Ebee ka ihe niile ziri ezi na ihe omume nke kacha mma
Onye mmeri nke “Omume Kasị Mma” bụ “Halloween Fright Night”. Foto zuru ezu, n'agbanyeghị
ìgwè mmadụ bụ mpaghara zuru ezu ahụmahụ. Ọ na-ewe ụfọdụ iji ụfọdụ mpaghara egwu
abughizi ezigbo ebe ujo, kama ebe obibi.
Nkwupụta ndị juri zuru ezu:
Abalị Na-atụ Egwu nke Halloween 8.11
Toverland Halloween 7.95
Na-atụ m ụjọ 7.73
Mpaghara Horror 7.19
Obodo ndị ahụ V 6.71
N'abalị Freaky 6.56
Okoneyo ehihie Honig 6.22
Nyocha Bajes 5.25
Ihe omume kacha mma nke Europe
Kedu ihe omume European nke kachasị mma n'oge a?
Onye mmeri bụ “Traumatica”. Site na imepụta ụwa zuru oke, ha nwere ọnụahịa a
Mkpọchi Halloween 7
Halloween im Ogige Ubi 6.8
Halloween Walibi 6.78
Fans ahụ nwere ike ịme ntuli aka maka onyinye ihu ọha. Onye mmeri nke Audience Award bụ
"Toverland". Ha anatala ntuli aka kacha baa uru.
Toverland Halloween 211
N'abalị Freaky 201
Mpaghara Horror na-enye, 2073, Apocalypse 151
Obodo ndị ahụ V 79
Abalị Na-atụ Egwu nke Halloween 68
Egwu abalị 61
Mee m ebere 8.0 29
Ememme Halloween 22
Okoneyo ehihie Honig 16
Ahụhụ Bajes: Nnapụta 12
Little Villains III nke 11
Halloween Drouwenerzand 3
Ọhịa nke Egwu 3
Boo Na Ogige Ubi 2
Spbọchị Egwu Halloween 2
Zoetermeer Halloween obodo 1
omume Abalị Na-atụ Egwu Halloween Heksendoorn Hellendoorn Perry Mulder egwu Onyinye Egwu Omume Na-atụ ụjọ Mkpu Walibi Holland
Mack Rides na-achọ ezinụlọ maka azụmahịa
Halloween na Avonturenpark Hellendoorn na-aga n'ihu
Adventure Park Hellendoorn ga-eme ememe Heksendoorn
Abalị Na-atụ Egwu ga-akwụsị ozugbo. Ihe a niile mehiere
Ogige ntụrụndụ na Netherlands ga-anọgide na-emechi maka oge a
24 sekọnd gara aga